Ukubhloga ngokudibeneyo: Ukuphendula kwimpikiswano
NgoLwesibini, Juni 15, 2010 NgeCawa, nge-19 kaJanuwari 2014 Douglas Karr
Ndibe nentlanganiso emnandi kunye ne-arhente apha e-Indianapolis esebenzayo ukuqinisekisa ukuba umxhasi wabo uqinile Isicwangciso sokubloga esidibeneyo. Baye kwisiqalo esihle kwaye sathetha kakhulu malunga nokuphikisana kunye nokubhloga. Ibhlog ethile abayimiselayo ixoxa ngesihloko esinokutsala ukugxeka kwabo banezimvo ezichaseneyo.
Ndibukele iinkampani ezininzi zisabela kugxeko olubi ngokuzama ukukhusela ngokufanelekileyo okanye ukuxoxa ngezikhundla zazo kwi phikisa blog. Isicwangciso esibi. Xa usiza kwibhlog yam ukuzokukhusela isikhundla sakho, awuzukuphikisana nam nje, uya kuzifumanisa uphikisana nomkhosi wabalandeli abacinga ngokufana abafunda ibhlog yam rhoqo.
Rhoqo, xa impikiswano iqala kwibhlog yam, ndiza kuhlala ndilinde. Ngokwesiqhelo, abafundi baya kuza kundisindisa kwaye bamkroboze umntu abe ziingceba. Yiyo le nto eyenzekayo xa ucatshukiswa ukuba uthathe idabi kwipropathi yeqela eliphikisayo. Awuphikisani neblogger-uphikisana nenethiwekhi emva kwebhlog. Kwaye njengoko uphikisana, ingqalelo iyonyuka… ukubandakanyeka kwezentlalo kuyakhula, ukukhangela kuyanda kwaye ufumana esi sithuba sichaseneyo kwiziphumo ze akho Nkampani.
Soloko uzisa umlo ekhaya. Ukuba ibhlogger ibhala ngawe okanye ngeshishini lakho ngokungalunganga, sebenzisa ibhlog yakho ukuphendula. Awudingi nokubakhankanya ... kodwa ikhonkco elibuyela kwiposti yabo liya kuthi liqwalasele ingqalelo yabo ukuze babone impendulo yakho. Ndiyathemba ukuba baya kubuya kwibhlog yakho kwaye banike izimvo. Mhlawumbi bazi ngcono! Kuya kufuneka uyazi ngcono, nawe.
Eyona nto imbi kunenkampani ephendula ngokuthe ngqo kwibhlog yabaphikisi ayiphenduli kwaphela. Kwimithombo yeendaba emitsha, akukho mpendulo ilinganiswa ne-hubris kunye nokusilela kobunyani. Ibhlogi engaphenduliyo kwisikhalazo esakhayo ihlala igxothwa njengengeyonyani… abekho ekuhleni ukuba babonakale kodwa bayazinyusa. Inkampani yabo kunye nebhlog yabo yokudibanisa baphulukana nokuthembeka kunye nokufunda.
Soloko uzisa umlo ekhaya!